ओलीको कार्यशैलीले एकताप्रति माओवादी सशंकित ! एमाले भन्छ– २ सय प्रतिशत ढुक्क हुनुस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कार्यशैलीले पार्टी एकताप्रति आशंका व्यक्त गरेको नेकपा माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् ।
सरकारका कामकारवाहीबारे छलफल नगरेको, माओवादी मन्त्रीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयमा पनि हस्तक्षेप गरेको, एकताका लागि चुनाव चिन्ह, जनयुद्ध र अनुपातमा आफ्नो अडान कायमै राख्ने तर लचकता नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति माओवादीका नेताहरुले आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई सचिव सरुवा गरेपछि माओवादी केन्द्रले झनै शंका गरेको छ । यस्ता एकलौटी निर्णयले पार्टी एकतामा नै कठिनाई उत्पन्न हुने उनीहरुको धारणा छ ।
पार्टी एकताको लागि यही २० गते विधान तथा मस्यौदा कार्यदलले प्रारम्भिक विधान तथा मस्यौदा बुझाए पनि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । मंगलबार बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो भने बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वास्थ्यमा केही खराबी देखिएको भन्दै सारिएको थियो ।
तर नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने विवादित भनिएका विषयमा छलफल नै नगरिएको बताउँदै सरकारसँगको विषय एकतामा जोड्न नहुने बताए । उनले पार्टी एकता अब २ सय प्रतिशतले हुनेमा ढुक्क रहन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
“म सबैलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु, वैशाख ९ गते नै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुन्छ । अहिले बाहिर विवादित भनिएका विषयमा छलफल नै हुन पाएका छैनन्,” नेता नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भने, “छलफल नै नभएपछि कसरी विवादित भयो ? मलाई अचम्म लागिरहेको छ । कुनै पनि विषयमा हाम्रो विवाद छैन । नेताहरुको व्यस्तताको कारण मात्र बैठक बस्न नसकेकको हो । अन्य कारण केही छैन । पार्टी एकता हुनेमा हामी त २ सय प्रतिशत विश्वस्त छौं । अब कसैले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन ।”
एकताको लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रारम्भिक विधान तथा प्रतिवेदन तयार भइसके पनि एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको अनुपात र जनयुद्ध लगायतका विषय टुङ्गिन बाँकी छ । त्यसमा चुनाव चिन्ह र जनयुद्धका बारेमा सहमति कायम हुने देखिएपनि एकतामा जाँदा अनुपात कसरी मिलाउने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् ।
“जनयुद्ध एमालेले कुनै न कुनै रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ, चुनाव चिन्हका विषयमा पनि खासै विवाद छैन तर अनुपात कसरी मिलाउने भन्नेमा केही जटिलता देखिएको छ । पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्ति पनि छुट्नुहुँदैन । हामीले त्यसैले बराबरी गरौं भनेका छौं । यसमा एमालेले मानेको छैन,”माओवादी केन्द्रका एक नेताले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।
दुवै दलले यसअघि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २ सय ९९ सदस्य रहने निर्णय भने गरिसकेका छन् । तर, कुन पार्टीको कति संख्या कायम हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
यसलाई शीर्ष नेताहरु बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
यसले एकता केही दिन पर सर्न सक्ने भए पनि एकतामै असर भने नपार्ने उनको भनाई छ ।
वैशाख ९ मै होला त पार्टी एकता ?
एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले आगामी अप्रिल २२ अर्थात वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने बताएपनि दुवै दलका केन्द्रीय नेतादेखि कार्यकर्ता भने अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले पछिल्लो समय सरकारको एकलौटी निर्णयबाट पार्टी सशंकित बनेको भन्दै वैशाख ९ गते पार्टी एकताको घोषणा हुन गाह्रो भएको बताए ।
“सरकारले एकलौटी निर्णय गरिरहेको छ, यो कुरा हामीलाई मन परेको छैन । कम्तिमा मन्त्रीहरुलाई त थाहा दिनुपर्छ । पार्टी नै एक भएर जाने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई जानकारी दिँदा के नै विग्रन्थ्यो र ? पार्टी एकताको लागि यो राम्रो सन्देश भएन । यो त पूरै तानाशाही प्रवृत्ति भयो । यसले जनतामा नकारात्मक असर पार्छ । हामी÷हामीमा त विश्वास छैन भने जनताले के आधारमा विश्वास गर्ने ? अहिले पार्टी एकताको लागि मुख्य तीन विषय मिल्न बाँकी छ । बैठक बस्न पनि सकेको छैन । यस्ता विषयले एकता केही पर धकेलिन सक्छ ।”
माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि तोकिएको सयमभन्दा केही दिन पर धकेलिन सक्ने बताए । “केही प्राविधिक कारण सहमति हुन बाँकी विषयमा नेताहरुबीच छलफल हुन पाएको छैन । दुवै दलका नेताहरु व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले पार्टी एकता केहीदिन पर धकेलिन सक्छ,” पौडेलले भने ।
माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं प्रवक्ता पम्फा भूसाल भने नेताहरुको व्यस्तताको कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँदै वैशाख ९ गते पार्टी एकताको घोषणा हुने बताइन् । “नेताहरुको कार्यव्यस्ताको कारण बैठक बस्न नसकेको हो । बुधबार पनि बैठक बस्ने भनिएको थियो तर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष बिरामी हुनुभयो, त्यसैले बैठक बस्न नसकेको हो, अन्य कारण केही छैन,” उनले भनिन् ।
तर नेकपा एमाले भने एकतामा ढुक्क देखिएको छ । एमालेले अब माओवादी पार्टी एकताबाट पछि फर्किन सक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्दै आएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि अब एकतामा आशंका नगर्न सबैसँग आग्रह गरे ।
कोही पनि पछाडि फर्कन नसकिने बताउँदै माओवादी केन्द्रलाई कुनै शंका नगर्न आग्रह पनि गरेको छ । एमाले नेता सुवास नेमाङले वैशाख ९ गते पार्टी एकता हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताए । उनले सचिव सरुवाको विषयले पार्टी एकतामा कुनै प्रभाव पार्ने दाबी समेत गरे ।
पोखरेल भन्छन्– अब चाँडै टुंग्याउनुपर्छ
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरलेले शुक्रबारसम्म पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने दाबी गर्छन् । बाहिर हल्ला गरेजस्तो केही पनि विमती नभएको उनको जिकिर छ ।
“एकदुई दिनभित्रै बैठक बसेर टुंग्याउँछौँ । कार्यदलले सुझाव दिएका विषय एकता संयोजन समितिमा छलफल हुन्छ,” उनले थपे । त्यस्तै उनले दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक संवाद भइरहेको र एकताको आन्तरिक गृहकार्य भइरहेकाले कुनै समस्या नरहेको जिकिर गरे ।
“बुधबार बैठक बस्ने तयारी थियो, प्रचण्डजी अस्वस्थ भएपछि रोकिएको हो, कार्यदलले सुझाव दिएकै मितिमा एकता गर्न बाधा छैन,” उनले भने ।
त्यस्तै एमाले नेता विष्णु पौडेलले पनि एकताको गृहकार्य मिहीन ढंगले भइरहेको बताउँछन् । “छिट्टै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्छ र बाँकी विषय टुंग्याउँछ । एकताका लागि दुवै पार्टीका नेताहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहनुभएको छ,” उनले भने ।
मधेसवादी पनि सरकारमा आउँछन्
रक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमाले महासचिव पोखरेलले मधेसवादी दल सरकारमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । संघीय समाजवादी फोरमसँग कुराकानी टुंगिइसकेको र ३ मन्त्रालय बाँकीसमेत रहेकाले फोरम सरकारमा आउने विश्वास उनको थियो ।
“उहाँहरूसँग अनौपचारिक सम्वाद भइरहेको छ । सरकारमा नआउने भन्नु भएको छैन । उहाँहरू आउनुहुन्छ,” उनले विश्वास व्यक्त गरे ।